Kedu ihe bụ udo udo pụtara ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Gịnị bụ udo pụtara
Gịnị bụ udo pụtara. Mgbe ndị mmadụ na-eche maka udo, ha na-eche ka otu ụmụntakịrị nọ n'ime ụlọ ụka na-akwado ịnata nsọ site na achịcha. Otú ọ dị, ọ dị mkpa mara ihe kpatara eji eme mmemme a n'ime ụka anyị.
udo bụ omume na na-anọchi anya oge Jizọs kesara achịcha nke Nri Anyasị Ikpeazụ. Nke ya na ndị na-eso ụzọ ya kerịta tupu akpọgidere ya n’obe. Ọ bụ a oge iji cheta ọzọ na Ọ nwụrụ maka gị. Ọ bụ oge ịtụgharị uche na inye ekele maka àjà Ya na itinye ihe n'ọnọdụ ziri ezi.
Ozugbo anyị matara ihe ọ pụtara n'ezie, ọ dị oke mkpa ịmata akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke ekwuru ihe omume a na ihe ọ nọchiri anya ya.
1 Ụfọdụ amaokwu Baịbụl gbasara nri anyasị nke Onyenwe anyị
2 Gịnị bụ akara nke Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị?
3 Onye nwere ike iri nri abalị?
Ụfọdụ amaokwu Baịbụl gbasara nri anyasị nke Onyenwe anyị
O naara achịcha ahụ, nye ekele, nyawaa ya ma nye ya ndị na-eso ụzọ ya, sị: ‘Nke a bụ ahụ́ m e nyere n’ihi unu; mee nka na ncheta nkem. N’otu aka ahụ, mgbe o risịrị nri abalị, o weere iko ahụ sị: “Cup a bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke dị n’ọbara m, nke a wụfuru n’ihi unu.” (Luk 22:19-20).
“N'ihi na mgbe ọ bụla unu na-eri achịcha a ma na-aṅụ iko a, unu na-ekwusa ọnwụ nke Onyenweanyị ruo mgbe ọ ga-abịa" (1 Ndị Kọrint 11:26).
“Lee m, anọ m n’ọnụ ụzọ ma kụọ aka. Ọ bụrụ na onye ọ bụla anụ olu m wee meghee ụzọ, m ga-abata, soro ya rie nri, ya na mụ na ya nọ. (Mkpughe 3:20).
Jizọs sịrị ha: ‘N’ezie, ana m asị unu: Ọ bụrụ na unu erighị anụ ahụ́ nke Nwa nke mmadụ, ṅụọkwa ọbara ya, unu agaghị enwe ndụ n’ime onwe unu. Onye ọ bụla nke na-eri anụ ahụ m ma na-aṅụ ọbara m nwere ndụ ebighị ebi, m ga-akpọlitekwa ha n'ụbọchị ikpeazụ. N'ihi na anụ ahụ́ m bụ ezigbo nri, ọbara m bụkwa ihe ọṅụṅụ n'ezie. Onye ọ bụla nke na-eri anụ ahụ m ma na-aṅụ ọbara m na-anọgide n'ime m, m na ya. Dị nnọọ ka Nna dị ndụ zitere m, m na-adịkwa ndụ n’ihi ịhụnanya Nna m, otú ahụ ka onye na-eri m ga-adịkwa ndụ maka m.” (Jọn 6:53-57).
“Abụ m achịcha dị ndụ nke si n’eluigwe bịa. Ọ bụrụ na onye ọ bụla erie achịcha a, ọ ga-adị ndụ ebighị ebi. Achịcha a bụ anụ m, nke m ga-enye maka ndụ nke ụwa. (Jọn 6:51).
“Ndị mmadụ ga-esi n’ebe ọwụwa anyanwụ na n’ebe ọdịda anyanwụ bịa, site n’ebe ugwu na ndịda, ha ga-anọkwa na tebụl n’alaeze Chineke. N’ezie, e nwere ndị ikpeazụ ga-abụ ndị mbụ na ndị mbụ ga-abụ ndị ikpeazụ” (Luk 13:29-30).
“Ya mere, onye ọ bụla nke na-eri achịcha ma ọ bụ na-aṅụ iko Onyenwe anyị n'ekwetaghị na ọ ga-emehie megide aru na ọbara nke Onyenwe anyị. Nyochaa onye ọ bụla n'ime onwe ya, riekwa achịcha ahụ ṅụọkwa n'ime iko ahụ. N'ihi na onye nēri nāṅu kwa nāmaghi aru nke Onye-nwe-ayi, nēri nāṅu kwa n'amam-ikpe nke aka ya. N’ihi ya, e nwere ọtụtụ n’ime unu ndị na-adịghị ike na ndị na-arịa ọrịa, ọtụtụ ndị uraworị ura” (1 Ndị Kọrint 11:27-30).
“Mgbe unu na-ezukọta, ọ bụghị ka unu rie nri anyasị nke Onyenwe anyị, n’ihi na onye ọ bụla na-eri nri nke ya n’echeghị ndị ọzọ. Ya mere, mgbe agụụ na-agụ, onye ọzọ na-aṅụbiga mmanya ókè. Ùnu enweghi ulo iri na ihe-ọṅuṅu? Ka hà na-eleda ọgbakọ Chineke anya ma na-eweda ndị na-enweghị ihe ọ bụla ala? Gịnị ka m ga-ekwu, m̀ ga-aja ha mma maka ya? N'ezie ọ bụghị" (1 Ndị Kọrint 11:20-22).
“Unu apughi iṅu n'iko nke Onye-nwe-ayi ma-ọbu n'iko ndi-mọ ọjọ; ha apụghị iri na tebụl Onyenwe anyị na tebụl ndị mmụọ ọjọọ. (1 Ndị Kọrint 10:21).
“Ya mere, ụmụnna m, mgbe unu zukọtara iri ihe, cherenụ ibe unu. Ọ bụrụ na agụụ na-agụ mmadụ, rie ihe n’ụlọ ka ọ bụrụ na ha zukọrọ ka ọ ghara ịkatọ ya. Maka ndị ọzọ, mgbe m ga-apụ, m ga-enye gị ntụziaka " (1 Ndị Kọrint 11:33-34).
Gịnị bụ akara nke Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị?
Ihe nnọchianya nke nri anyasị nke Onyenwe anyị bụ achịcha na mmanya. Jizọs mere ka ihe dị mfe ma dị mfe ịchọta ka ọ ghara ime ka nri anyasị ahụ sie ike nke ukwuu. Achịcha na mmanya aghọghị anụ arụ na ọbara nke Jisus, ha bụ naanị akara. Ihe dị mkpa abụghị nri n'onwe ya, ma na-anọchi anya.
Achịcha: Jizọs kwuru na achịcha ahụ na-anọchi anya ahụ Ya, nke gbajiri agbaji maka anyị. N'elu obe ọ tara ahụhụ dị ukwuu n'ihi ịhụnanya anyị nwere. Ọ tara ahụhụ ihe mgbu anyị kwesịrị, n'ọnọdụ anyị.
«O wee were achịcha na-ekele ekele, na nyawaa ya nye ha, na-asị: Nke a bụ ahụ m, nke e nyere gị; Menu nka n'ichetam. N’otu aka ahụ, mgbe o risịrị nri anyasị, o weere iko ahụ, sị: “Cup a bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke dị n’ọbara m, nke a wụfuru n’ihi unu.”. Luk 22:19-20
Mmanya: na-anọchi anya ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị n'etiti gị na Chineke. N’ime Testament Ochie, e ji àjà were mechie ọgbụgba-ndụ, ebe a na-awụfu ọbara anụmanụ ahụ. Ọbara Jizọs, nke bụ ihe niile wụfuru mgbe ọ nwụrụ, n'otu oge ahụ kwụọ ụgwọ maka mmehie anyị na guzosie ike a Nkwekorita ohuru n'etiti ayi na Chineke.
N’otu aka ahụ, mgbe ha risịrị nri anyasị, o weere iko ahụ, sị: Iko a bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke dị n’ime ọbara m, nke a wụfuru n’ihi unu.. Luk 22:20
Mgbe ị na-eri achịcha ma na-aṅụ mmanya, ị na-egosi ụwa na Kraịst nwụrụ maka gị. Àjà Jizọs kwụrụ ụgwọ maka mmehie gị ma ugbu a ọ na-ebi n’ime gị. N'ụzọ ihe atụ, ọ bụ dị ka ma ọ bụrụ na ị nwụrụ n'obe na bilitere na Jizọs.
«Ya mere, mb͕e ọ bula unu nēri achicha nka, nāṅu kwa iko a, unu nēkwusa ọnwu Onye-nwe-ayi rue mb͕e Ọ gābia.".
1 Ndị Kọrịnt 11:26
N'aka nke ọzọ, Jizọs enyeghị ntụziaka a kapịrị ọnụ na ụdị achịcha ma ọ bụ mmanya ị ga-eji, ma ọ bụ nha nke akụkụ ya, ma ọ bụ ụzọ kachasị mma isi kesaa na iri nri, ma ọ bụ ugboro ole a ga-eji ya. Ihe a niile bụ nke abụọ na ọ dabere na ụka ọ bụla ka esi eme ya. Kachasị ihe dị mkpa bụ ihe Nri Anyasị na-anọchi anya ya, ọ bụghị kpọmkwem ka e si were ya.
Onye nwere ike iri nri abalị?
Ọ bụrụ na ịnakwere Jizọs dịka Onyenwe gị na Onye Nzọpụta gị, ị nwere ike ịga nri anyasị ahụ. Ọ dị mkpa ịghọta ihe Jizọs meere gị, nri anyasị ahụ bụ maka ndị a zọpụtara. Ọ baghị uru ịṅụ mmanya ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị ma ọ bụ nabata Jizọs, n'ihi na nri anyasị ahụ bụ iji gosi na ị nabatara Jizọs. Inwe oriri nsọ na-ekwetaghị bụ enweghị nkwanye ùgwù maka Jizọs. Ọzọkwa, Bible na-ekwu na ọ bụ ihe ọjọọ.
Site Discover.online Anyị nwere olileanya na akụkọ a baara gị uru. Ọ bụrụ na ị chọrọ ugbu a mara kedu ka ụka mbụ siri dịOtu esi hazie ya na otu esi emepụta ya, gaa n'ihu na-agagharị na webụsaịtị anyị.
Gịnị bụ akara asaa nke apocalypse
Olee otú Chọọchị mbụ dị?